CANAB "CHARDONNAY": SHARAXAAD KA MID AH ASTAAMAHA NOOLAHA MID KA MID AH NOOCYADA UGU CAANSAN EE CALEEMAHA ADDUUNKA - CANAB
Canab "Chardonnay": sifooyinka, isticmaalka iyo hantida faa'iido leh
Caleemaha canabka ah ee Chardonnay waa mid caalami ah, maadaama ay ku kori karto aag kasta oo cimilada ah iyo soo saaro dalagyo badan.
Waxaa intaa dheer, khamriga laga soo saaro "Chardonnay" ee waddammo kala duwan ayaa ku riyaaqaya dhadhankiisa gaarka ah.
Wadanka iyo asal ahaan kala duwanaanta canabka Chardonnay
Waqtigan xaadirka ah, saynisyahanadu si cad uma qeexi karaan taariikhda noocyada kala duwan. Asalka "Chardonnay" waxaa lala xiriiriyaa qoyska noocyo "Pinot".
Shaqaalaha Jaamacadda California, sannadkii 1991, waxay sameeyeen daraasad, taas oo ay ku ogaadeen in noocani ay ahayd natiijada Dhiibbaxa "Gue Blanc" iyo, waxay u badan tahay, "Pinot Noir". Laakiin inkastoo ay jiraan baaritaanno badan, qaar ka mid ah saynisyahannada ma aqbalaan nuqulkan. Ampelograf ka soo jeeda Faransiiska Pierre Gale ayaa hubaal ah in "Chardonnay" aysan gebi ahaanba la xiriirin qoysaska kale ee kala duwan.
Waxaa sidoo kale jira muran ka taagan waddanka uu asal ahaan ka soo jeedo, laakiin cilmi-baarayaasha intooda badani waxay aaminsan yihiin in Chardonnay uu ka yimid Rome.
Ma taqaanaa? Waxaa la rumeysan yahay in kala duwanaanta noocaas ah ayaa waxaa ka mid ah Burgundy, oo ah tuulada Chardonnay, kaas oo magaca noocyo kala duwan u muuqday.
Isticmaalka canab "Chardonnay"
Kala duwanaanta canabka "Chardonnay" waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan caalamka. Waxaa lagu koray Aasiya, Yurub, Australia, Koonfur Afrika, Koonfurta iyo Waqooyiga Ameerika. Meel kasta oo uu ku siiyo natiijo fiican - khamri cad, hodan ku ah caraf udgoon iyo dhadhan gaar ah. Arrin xiiso leh, dal kasta, iyada oo ku xiran ciidda oo canabku koraan iyo isbarbardhigga diyaargarowga, Khamriga Chardonnay marwalba wuxuu leeyahay dhadhankiisa gaarka ah.
"Chardonnay" cusub oo aan la isticmaalin, sababtoo ah qaybaha cufan ee saxarada iyo diirka waxay ka samaysan yihiin kaliya 20% canab, kuwa kale intooda badan waa dhagaxyo iyo tareemo. Kooxuhu ma laha bandhig iyo yar yar.
Noocyada lagu sharraxay waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka khamriga ah oo leh noocyo kala duwan oo miro ah iyo dhadhan jilicsan.
Geedka canjeerka ah ee loo yaqaan "Kesha", "Valentine", "Augustine", "Laura", "Bazhena", "Monarch", "Harold", "Arcadia", "Talisman", "Timur".
Astaamaha iyo qaababka noolaha ee canab
Canab "Chardonnay" waxay leedahay sharaxaad sida noocyo badan oo reer galbeedka ah. Waa saldhig udun cad oo cad cad. Inkastoo xaqiiqda ah in Chardonnay ay ku kori karto ciidda, waxay si aad ah u daboolaysaa xaaladaha cimilada, falalka kaarboorka iyo xaaladaha kaydinta kuwaas oo saameyn kara dhadhanka khamriga, natiijadanna waa mid aan la saadaalin Karin.
Xilliga xagaaga, canabku waxay u baahan yahiin waraabin joogto ah, kuwaas oo soo saaro waraabinta si aad u wanaagsan u samayn karto.
Waa muhiim! Qodobka lagu beero noocyada kala duwan: dalalka leh jawi qabooban, duurka ayaa lagu beeray meel fog oo ka mid ah midba midka kale, iyo jawiga kulul, dalabku waa inuu ka dhacaa meel fog.
Kalluunka xayawaanku waa mid adag ama dhexdhexaad ah. Caleemaha - lama duubin, bunni.
Caleemaha waxay leeyihiin midab cagaaran oo leh calaamad fiican. Dhinaca dambe ee saxanka warqadda waxoogooga yar, xajmiga hareeraha. Xaashidu waxay ka kooban tahay shan sharooto, kuwaas oo leh dhar qoyan. Xilliga dayrta, waxay dhammaantood noqdaan midab jaalle ah oo qallalan oo qallajiya geesaha.
Rucubyo canab - qaliinka ama cylindrical, cufnaanta dhexdhexaadka ah. Waxay leeyihiin qaab dabacsan sababtoo ah xaqiiqda ah in ugxan-yari hore u dhaco. Cabbirka celceliska rucubada (illaa 12 cm dheer iyo ilaa 10 cm ballaaran) miisaankeedu yahay ilaa 100 garaam.
Tilmaanta nooca berry ah
Kala duwan Tani waxaa lagu gartaa miraha midab cad-cagaaran oo leh dahab dahab ah iyo ubax cadaan ah. Maqaarka waxaa lagu dabooli karaa dhibco madow. Qaabka nooca berry waa wareegsan, wax yar ka yar. Canabku wuxuu miisaankiisu yahay 15 garaam, maqaarka waa cufan iyo dhuuban. Gudaha gudahood waa 2 ama 3 lafo. Suntu waxay leedahay dhirta hodanka leh ee jilicsan iyo dhadhanka casiir leh.
Ma taqaanaa? Kaliya 3 nooc oo canab ah ayaa ku habboon inay samaystaan ​​champagne dhabta ah, mid ka mid ah waa Chardonnay.
Kala duwanaanta canabka ee Chardonnay waxay si dhexdhexaad ah u adkaataa qaboobaha xilliga qaboobaha (illaa -20 ° C), laakiin waa mid aad u xasaasi u ah dhaxan guga, sidaas awgeed waa lagama maarmaan in la qaado tallaabooyin lagu xakamaynayo duurka. Waa in la ammaano iyadoo aan loo eegin cimilada kaas oo canab koraan.
Cadaadiska cayayaanka iyo cudurrada
In cimilada dabaysha, heerkulka hooseeya ee guga iyo roobabka bilowga xagaaga, daadinta ubaxyada iyo dhirta dhirta ayaa dhici karta.
Si canab si aan cudurku u gaarin cudurada ay sababto kor-u-kicida, waxaa lagu talinayaa in lagu beero aag hawo wanaagsan leh ("Chardonnay" ayaa saameeya oidiyum iyo caarad).
Caanaha - Tani waa nooc ka mid ah fangas-qaadista fangaska, oo aan la ogaan karin maalmaha ugu horreeya ee jabitaanka geedka.
Marka uu ku faafo fungus, waxaa jira geeddi-socod loo aqoonsan yahay sida la'aanta Bacriminta macdanta, saboolka ciidda ama muuqaalka muuqaalka chlorosis. Inta lagu jiro xilliga xagaaga, ilaa 8 wareeg oo cudur ah ayaa kobcaya. Caabuqa ayaa horayba u dhici kara heerkul ah + 8 ° C, guga xayawaanka fungus fungus iyo korodhka qoyaanka sii kordhaya, iyo u gudbaya warshad, waxay soo galaan unugyada. Tani waa nidaamka infekshanka asaasiga ah.
Marka uu ku dhaco xummad:
Baro caleemaha, sameynta dhibco hufan oo jaale ah - sida caadiga ah saliid.
Caleemaha yaryar waxay leeyihiin waxyaabo yaryar oo yar, oo ku wareegsan illaa 1 cm, kuwa waawaynna waa kuwo xagal leh ama mid culus, oo ku faafaya xididdada taarikada.
Beedka oo dhan waa la saameeyaa: caleemaha, burooyinkeeda, berry, caleemo.
Waxaa jira hoos u dhaca koritaanka baadiyaha, caleemaha saameeyeen ayaa dhacaya.
Sidee looga hortago cudurka?
Abaabulidda biyo-mareenka wanaagsan iyo waraabinta waraabka.
Waqtiga si aad u quudiso dhirta.
Ka saar haramaha, jarjar qaybaha qallalan ee dhirta, ka samee baadiyaha si habboon in ay jirto neefsasho wanaagsan oo dhirta si deg deg ah u qalajisa ka dib roobka.
Kiimikada kiimikada lagu buufiyo si looga hortago xagta.
Moobeyl waa in la sameeyaa 2 jeer xilli: xilli guga iyo ka dib goosashada.
Maareyn kasta waa in loo qaybiyaa 6 marxaladood:
Ka hor inta ubax.
Ka dib markii ubax.
Ka hor inta uusan dhicin ugxansii.
Marka caleemaha gaaro 12 cm.
Ka dib markii quudinta kowaad.
Baro sida si habboon u diyaargaroobaan oo u daadi sidan oo canab, iyo sidoo kale sida loo abuuro abuurka.
Oidium - waa caarad budo ah, fangaska ugu caansan ee infekshanka ku dhaca.
By dhaawacaya qaybaha cagaaran ee warshadda iyo berry, waxay ka dhigtaa iyaga aan ku haboonayn for winemaking. Calaamadaha caabuqa:
Guga ee caleemaha yar yar iyo caleemaha waxaa lagu daboolay ubaxyada cad, oo dhoobo oo la qalajiyey. Iyadoo guuldarro xoog leh, unugyada waxay noqdaan madow midab leh, isla markaana dhakhso u dhintaan.
Xilliga xagaaga, ubaxyada ayaa la qubey, ugxan-yar oo ah nooca berry ah ayaa lagu daboolay ubaxyada madow. Waxaa jira jajab ah ee berry, ay qoyaan.
Maareynta ka hortagga 2 jeer xilli kasta: guga iyo goosashada ka dib.
Daaweyn kasta waa in loo qaybiyaa qaybo (ilaa 6 marxaladood), oo leh mudo ah 20 maalmood.
Waa muhiim! Marka ay berry u bislaadaan nMaareyn ma jirto. Si aad u joojiso guuldarada, waqtigan waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo xalka kaneecada (5 garaam 10 litir oo biyo ah).
Wanaagsan noocyo waa:
Joogitaanka tiro badan oo ah noocyo of clones.
Qalabka khamriga tayo sare leh.
Cadaadiska sare ee muddada qalalan.
Cadaadiska ugu sarreeya ee barafka.
Sare (qiyaastii 40%) dhalid.
Cadaadiska hooseeya ee cudurada fungal.
Miraha ayaa u nugul duufaan iyo duufaan.
Baahida loo qabo carrada bacriminta.
Waxaa macquul ah in uu waxyeelo u geysto dhaxan guga.
"Chardonnay" waa noocyo gaar ah, kaas oo soo saaray tiro cajiib ah oo tayo sare leh oo khaas ah.